Tsy ny mpifosa no amafan-trano | NewsMada
Tsy ny mpifosa no amafan-trano
Andro isaina sisa… Tsy inona fa ny fitsidihana apostolika hataon’ny papa François eto Madagasikara, ny 6 ka hatramin’ny 10 septambra ho avy izao. Saika efa samy seriny amin’izany avokoa ny isan-tsehatra sy ny isan’ambaratonga, samy manao izay afany sy efany. Mijery ny tena izao tontolo izao.
Amin’izany, mandeha avokoa izao karazana fepetra sy fisorohana mialoha izay mety hitranga rehetra izao. Na eo amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana sy filaminana izany, ohatra, na eo amin’ny fifamoivoizana sy ny fitaterana, na eo amin’ny fampiantranoana… Lehibe ny raharaha fa tsy azo tamoraina.
Hetsehina sy ikelezana aina amin’izany mbamin’ny fanadiovana manokana ny tanàna, ohatra, indrindra izay lalana sy toerana holalovan’ny vahiny. Tsy mahagaga, ara-dalàna sy ara-drariny avokoa izany rehetra izany. Arahaba soa, arahaba tsara… Mitsinjo mialoha izay mety hitranga tokoa ny hoe mitondra.
Amin’ny toy izany, saika voateniteny mandrakariva ny hoe: rehefa tonga vahiny ve vao mahatsiaro manadio sy mandamina? Na tsy mba rototra na tsy mendrika izay filaminana sy fahadiovana manokana izay ny tompon-tany andavanandro mandavantaona… Tsy misy firy izay ezaka amina hetsika mitohy?
Mahay mandray vahiny ny Malagasy fa tsy maika amin’izay mahasoa ny tenany? Ny vahiny mandalo no itandroana manokana fandriampahalemana, andrindrana mialoha ny fifamoivoizana, ny fanadiovana… Nefa na inona hetsika atao, efa fantatry ny vahiny mialoha avokoa ny tena zava-misy eto an-toerana.
Tsy ny hetsika fandraisana vahiny no ratsy fa ny tena tsy mba mahalala izay tokony hatao sy ny mety ho vita raha tsy tonga vahiny no mampanongo tena. Tonga vahiny lava amin’ny taniny ny Malagasy? Toa tsy tompony, toa tompony mangataka atiny, toa eo am-pandrasana hatrany koa vao mahita ny atiny…
Rahoviana vao hahatsiaro tena fa tsy ny mpifosa na ny vahiny tonga na lasa no amafan-trano fa ho an’ny tena tompon-trano aloha voalohany? Mba hisy amin’izay ny fiovana…